အမေရိကန်အချို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ Facebookသုံးခွင့် မရ ~ The ICT.com.mm Blog
အမေရိကန်အချို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ Facebookသုံးခွင့် မရ
မြန်မာပြည်မှာသာ Facebookကို သူ့ထက်ငါ အလုအယက် သဲကြီးမဲကြီး သုံးနေကြပေမယ့် ကမ္ဘာ့အတိုးတက်ဆုံး နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်မှာ ရုံးထိုင်အလုပ်လုပ် နေကြတဲ့ Officerတွေရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းဟာ Facebookတောင် မသုံးနိုင်ကြဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ၂၀ရာနှုန်းဆိုတော့ အမေရိကန် ငါးယောက်မှာ တစ်ယောက်က အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အချိန် Facebookသုံးဖို့ အခွင့်မရကြပါဘူး။ ဒါဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကို Facebookမသုံးနိုင်အောင် Blockလုပ်ထားလို့ ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်အလုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အချိန်ပိုင်း အလုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချို့ အလုပ်ရှင်တွေဟာ ၎င်းတို့ရဲ့ ရုံးမှာ Officerတွေ Websiteသုံးစွဲမှုကို ကန့်သတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လေ့လာမှုပြုထားတဲ့ မူလGraphကိုလည်း တင်ဆက်ပေးလိုက် ပါတယ်။ ဒီစာရင်းကို ကြည့်ရင် Facebook၀က်ဘ်ဆိုဒ်ဟာ Blockလုပ်ခံရမှု အများဆုံး ဖြစ်ပြီး Twitterကတော့ 15.1ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ဒုတိယလိုက်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ YouTubeအပါအ၀င် အခြားသော ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုလည်း အချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေက ပိတ်ပင်ထားကြပြီး Officerတွေ အနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့ အလုပ်ခွင်ထဲမှာ အဆိုပါ Websiteတွေကို အသုံးပြုခွင့် မရကြပါဘူး။
Newer သင့်ကွန်ပျူတာအတွက် MSE Update
Older ဘီလျံနာဂျော့ဆိုးရော့စ် သုံးကြိမ်မြောက်လက်ထပ်
Appleရဲ့ ၀န်ထမ်းများဟာ သူ့ပြိုင်ဖက်များလောက် စွဲဆောင်မှု မရှိပါ
Appleဟာ စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ထုတ်ကုန်များကို ထုတ်လုပ်နေပေမယ့်လည်း သူ့၀န်ထမ်းတွေကတော့ စွဲဆောင်မှုမရှိပါဘူး။ လူမှုကွန်ယက် ရည်းစားရှာတဲ့ A...
Facebookထက် NSAက သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရယူသူပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ချိုးဖောက်တဲ့ သတင်းကြီးနှစ်ပုဒ် မကြာမီက ထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုက Facebookဟာ News Feedများမှာ ပြသတဲ့ ပို့စ...
News Feeds မှာ လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုစမ်းသပ်မှု လုပ်ထားကြောင်း Facebook ထုတ်ပြော
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေဟာ နည်းပညာရဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းထဲက အစမ်းသပ်ခံ ကြွက်ကလေးတွေ ဖြစ်နေပါရော့လား။ Facebook က အကြမ်းအားဖြင့် သုံးစွဲသူတွ...
Facebookက အလုပ်ကိစ္စများအတွက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Facebook At Work ဗားရှင်းကို တီထွင်နေ
အလုပ်ကနေ အိမ်ပြန်ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ Facebookကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း အသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အခုတော့ Facebookက သင့်အလုပ်မှ အချိန်တွေကိုလည...
Apps, Featured, Gadgets, Mobile, Review
Facebookက ထုတ်လုပ်မယ့် Smartphone?
Facebookက စမတ်ဖုန်းတစ်လုံး တီထွင်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များအတွင်းမှာ မကြာခဏ ထွက်ပေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Facebookက စမတ်ဖုန်းဈေး...
Facebookမှာ အလိုအလျှောက်ပြသမယ့် ကြော်ညာဗီဒီယိုတွေကို Disable ပြုလုပ်နည်း
Facebookက Desktop နဲ့ မိုဘိုင်းမှာ အလိုအလျှောက် ပြသမယ့် ဗီဒီယိုတွေကို ထည့်သွင်းဖို့ စီစဉ်နေတာ ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ အခြားနိုင်ငံများ...
Facebook, Google Accountများကို အခြား Device များမှာ Logout ပြုလုပ်ခြင်း
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပြူတာမှာ Gmail ဖွင့်ကြည့်ပြီး Logout ပြုလုပ်ဖို့ မေ့သွားဖူးသလား? ဒါမှမဟုတ် အများသုံး ကွန်ပြူတာများ၊ အင်တာနက်ဆ...
Facebook က Drones, Lasers များကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက် ထုတ်လွှင့်ပေးမည်
Facebook က Drones, Satellite နဲ့ Lasers များ ကို အသုံးပြုပြီး အင်တာနက် ထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ Facebook က ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Inter...
Facebook က Paper App ကိုဖြန့်ချီ
Facebook က Paper လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ App တစ်ခုကို iOS အတွက် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်မှာ အမေရိကန်မှာပဲ အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ...
Non-Profit Organization ၁၈ ခုကို Facebook ကနေ တိုက်ရိုက်ငွေလှူလို့ရတော့မည်
Facebook ကနေ Non-Profit Organization ၁၈ ခု ကိုငွေလှူလို့ရမည့် Feature အသစ်ကို Facebook ဟာ ဒီနေ့ပဲ မိတ်ဆက်လိုက်ပါပြီ ။ Holiday Season ကစ...
4 thoughts on “အမေရိကန်အချို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ Facebookသုံးခွင့် မရ”
even in Malaysia, i can’t use Facebook at my work :/
Phyu Aung says:
Mong Kyaw Htun says:
Good Restriction! If they are using facebook, they gonna check the feeds update again and again. Then, the work couldn’t be done! Agree wit this! (y)
M Clo Lay says:
ရတယ္ေလ Twitter ေပါ့ ဟဲဟဲ